Tantaram-pitiavana Biby Capybaras Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2016 9:34 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, বাংলা, Ελληνικά, Swahili, Español, русский, Italiano, English
Capybaras maka aina ao amin'ny valam-biby ao amin'ny kaominina Saitama, avaratr'i Tokyo. Sary avy amin'ny fantsona YouTube capybarahp.
Miaina tantaram-pitiavana kely miaraka amin'ny capybara, biby mpikiky lehibe indrindra eto ambonin'ny tany mitovy amin'ny hamisitera manana toetra malefaka sy mpisafidy handro amin'ny lohataona mafana i Japana.
Ohatra, manana mpamandrika maherin'ny 6.000 sy efa nisy nijery in-enina tapitrisa ny fantsona YouTube “pejin'ny mpitia capybara”. Ny asan'ny fantsona YouTube? “Mampahafantatra ny capybara amin'ny lahatsary faran'izay avo lenta indrindra”
Nahatratra 1,2 tapitrisa hatramin'izao ireo nijery ny lahatsary “Mikaotra capybaras maro”:
Misy ihany koa ny Tiako ny Capybaras (カピバラ大好き), habaka natokana ho an'ny biby mpikiky lehibe indrindra manerantany. Misy ny bilaogy, fantsona YouTube sy ny kaonty Twitter, saingy ny ankamaroan'ny hetsika dia mitranga ao amin'ny pejy Facebook izay manana mpanjohy maherin'ny 33,000 sy ahitana vaovao farany matetika.
Ny tena manintona ny habaka dia ny “tantsambo capybara” izay mampiseho ny toerana ahitana biby mpikiky tahaka ny hamisitera ao amin'ireo prefektiora manerana an'i Japana.
Ahitana sary mahafinaritra ihany koa ny kaonty Twitter-n'ny pejy:
Nandeha aho ary nahita capybaras tao amin'ny Hotely Reoma (ao Kagawa ao amin'ny nosy Shikoku), ary hisidina handeha hody aho androany. Hanome vaovao farany ao amin'ny bilaogiko.
Mampiseho capybara mitsambikina avy ao anaty dobo ny lahatsary malaza indrindra ao amin'ny fantsona YouTube;
Ny Capybaras, biby teratany avy ao Amerika Atsimo dia fanta-daza ao Japana noho ilay mpilalao sarimiaina malaza antsoina hoe Kapibara-san.
Avy amin'ny TRYWORKS: I Kapibara-san dia miara-miasa amin'ny LINE Pokopan ao amin'ny lalao vaovao iray malaza! Anisan'ny miady amin'ny biby hafa sy namana noho ny fahafinaretana marobe i Kapibara-san. Eto ny antsipirahany: https://t.co/MSX5rqFzkY pic.twitter.com/lJKJqCJ6kt
Tsy voafetra amin'ny Japoney ihany ny fitiavana capybaras.
Namorona toro-lalana ho amin'ny toeram-pihaonam-biby [fisotroana kafe] ao Japana i Umami Dearest, mpikambana ao amin'ny vondrona antserasera Amerikana MetaFilter, ary ahitana ny toerana misy capybaras ao amin'izany firenena izany ny habakany.
Ngezabe ny capybaras ao amin'ny toerana fijerena fiompiana biby ao Japana
Ho an'ireo izay liana, Nandefa Fanontaniana Valiny sasany momba ny toeran'ny biby ao Japana ihany koa i Umami Dearest .